Socio-eco Archives · Page 3 de 120 · déliremadagascar
Cette année encore, la STAR n’a pas manqué de distinguer ses collaborateurs pour preuve de son engagement et
Roa volana ny faharetan’ny fifaninanana Cleaning Challenge karakarain’ny Fondation Terra. Ny volana voalohany no vita ka nozaraina loka
Teny amin’ny trano fiasany teny Fiadanana no nandraisan-dRamatoa minisitry ny fampianarana ambony, ny mpandrindra ny rafitry ny firenena
Dans le contexte pandémique qui sévit encore le monde actuellement, l’ouverture officielle des e-journées nucléaires virtuelles s’est faite
L’ONG TAHEZA (TAnora HEry sy ozatrin’ny Zandry Afara) prévoit faire des dons de fournitures scolaires aux élèves de
Socio-eco	 2 septembre 2021 R Nirina
Hiara-hiasa amin’ny fanjakana. Hiara-mahalala fa nandalo fotoan-tsarotra i Madagasikara noho ny valanaretina Covid-19. Continuer la lecture →
MADA VISION: Ho fanarenana ny toekarena ny « Foire économique-commerciale des 23 régions »
Mampisokatra lalam-barotra. Ho mariky ny fifanomezan-tanana amin’ny fanarenana ny toe-karena sy fanampiana mpandraharaha, ny orinasa hiarina indray taorian’ny valanaretina Covid-19 dia mikaraka hetsika ara-toekarena sy ara-barotra manerana faritra 23 ny Mada Vision. Continuer la lecture →
Socio-eco	 1 septembre 2021 R Nirina
FANAOVANA VAKISIN’NY COVID-19 : Mijoro ho modely ny mpitantana ny kaominin’Alasora
Mendrika halain-tahaka. Niaraka namonjy CSB2 teny Alasora mba hanao vakisin’ny covid-19 ny mpitantana ny kaominin’Alasora ny 01 septambra 2021. Continuer la lecture →